सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न विदेशी पाहुनाकै साइत कुर्नुपर्ने हो, सरकार ! कहिले सम्म यस्तो ? - Kendra Khabar
सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न विदेशी पाहुनाकै साइत कुर्नुपर्ने हो, सरकार ! कहिले सम्म यस्तो ?
२०७५, १४ मंसिर शुक्रबार ०४:३१
गत भदौ १४ र १५ गते भएकाे बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालका खाडीका देशहरूको प्रयास (बिमस्टेक) शिखर सम्मेलनमा काठमाडौंलार्इ चिरिच्याट्ट पारिएकाे थियाे । बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा काठमाडाैंकाे मुख्य सडकका खाल्डाखुल्डी रातारात पुरियाे । सडकका भित्तामा रंगरोगन गरियाे । विदेशि पाहुनालार्इ देखाउनकै लागि भए पनि काठमाडाैंलार्इ चिरिच्याट्ट पारिएकाे थियाे ।
बिमस्टेक शिखर सम्मेलनका लागि चाबहिल–बौद्ध सडक अनुगमन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबीर महासेठ
अाजबाट विवादास्पद ‘एशिया प्यासिफिक समिट’काे सम्मेलन हुदैँ छ । अन्तरनिर्भरता, पारस्परिक समृद्धि र सर्बब्यापक मूल्य–मान्यता’ को नारासहित हुन लागेकाे सम्मेलनका लागि विदेशी विशिष्ठ पाहुनाको अगमन अाउनेक्रम जारी छ । याे सम्मेलनका लागि पनि सडकका खाल्डाखुल्डी रातारात पुरिएकाे छ ।
गैर सरकारी संस्थाले आयोजना गर्न लागेको सम्मेलनका लागि पनि रातारात पिच तथा टालटुल गरिएको छ । कार्यक्रम आयोजना हुने होटल ह्यात आसपासदेखि चावहिल मित्रपार्क लगायतका स्थानको सडक गएराति टालिएको हो । साथै वाटोको धुलो समेत ब्रुमरले सफा गरिएको छ । लाज ढाक्न हाेस् या विदेशी पाहुनालार्इ देखान हाेस् विदेशी पाहुना अाउँदा चाहिँ काडमाडाैंकाे सडकका मुहार रातारात फेरिन्छ ।
काठमाडौंको धेरै ठाँउका सडकमा खाल्डा भएपनि विशिष्ट अतिथि आउने सडक मात्रै पिच भएकोमा सर्वसाधारणले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सर्वसाधारणले बारम्बार धुलो र हिलोको गुनासो गर्दा पिच नभएको सडक एउटा गैर सरकारी संस्थाको सम्मेलनका लागि टालटुल गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । यसअघि बिमस्टेक सम्मेलनका लागि पिच गर्नुका साथै टालटुल गरिएको पिच एक सातापनि टिकेको थिएन ।
हुन त विदेशी पाहुना आउँदा सडकलाई चिरिच्याट्ट पार्ने प्रचलन नेपालमा नौलो होइन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गत वैशाख २८ गते दुईदिने नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। मोदी आउनुअघि चाबहिलचोकदेखि ह्यात होटलसम्मको सडक रातारात कालोपत्रे गरियो । ह्यात होटल गेटबाट टुसालतिरको भने सडक यथावत् छोडियो। मोदी ह्यात होटलमा बस्ने भएपछि उक्त सडकको धुलो छोप्ने काम गरिएको थियो।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अाउने बेला सडक सफा गर्दै
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी २०७१ साउन १८ गते नेपालको राजकीय भ्रमणमा आउँदा काठमाडौं उपत्यका सिँगारेर दुलहीजस्तै बनाइएको थियो। त्यसको तीन महिनापछि काठमाडौंमा सार्क शिखर सम्मेलन भयो। सम्मेलनमा सहभागी हुन सार्क सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुख काठमाडौं आएका थिए। उक्त अवधिमा पनि काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरियो।
यसले विदेशी सरकारप्रमुख वा राष्ट्रप्रमुख आउँदा मात्रै सडकलगायतका संरचना सफा र चिटिक्क पार्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । अरू बेला वास्तै नगर्ने तर विदेशी पाहुना आउँदा रातारात काम गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले जनतामा आक्रोश बढेको छ।
प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चबाटै भाषण दिनुहुन्छ ‘बाटाेमा धुलाे उड्न कम भएकाे छ, काठमाडाैंकाे धुलाे सफा गरिन्छ ।, काठमाडाैंका सडक बढारिन्छ, धाेइन्छ।, अनि थाहा पाउनु हुन्छ सरकार, जहिले नि भन्छन् कलंकी-नागढुंगा, कलंकी नागढुंगा सडक हेर्न जानुस्, त्यहाँ छ सरकार’ ।
तर स्थानीयवासीले भने ‘कलंकी–नागढुंगाको सडक निर्माण छिटो गर’ भन्दै दवाब दिइरहेका छन् । राजधानी प्रवेश गर्ने मुख्य नाका कलंकी-नागढुंगा सडक वर्षौसम्म अस्तव्यस्त छ । वर्षामा हिलो र अरुबेला धुलोले सडकमा यात्रा गर्नै सकस हुन्छ । सडकमा यात्रा गर्नेहरु धुलोको कुहिरोमा हराउँछन् । कतै हिलोमा खुट्टा गाडिन्छ । स्थानीयबासीको त बेहाल नै छ ।
विदेशी पाहुना आउँदा सरसफामा ध्यान दिनु स्वभाविक हो । तर जनतालाई बाह्रै महिना धुलो धुवाँ, खाल्डाखुल्डी र फोहोरमैलाको सास्ती दिएर पाहुनाका लागि सफा शहर रहेको भ्रम पार्न गरिएको प्रचारबाट राजधानी आजित छन् ।